Amandla+ UKUPHILISWA kwexesha elizayo Ukutshintshwa kwe-Olmwagen H20 Carbon 0 - I-Airbnb
Amandla+ UKUPHILISWA kwexesha elizayo Ukutshintshwa kwe-Olmwagen H20 Carbon 0
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJon
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-27 Okt.
Umgangatho wesibini unee-bdrms eziyi-2 zabucala w/ iidesika, iibhedi kunye nee-dressers. Elinye elinebhedi enkulu. Enye ibhedi elala umntu omnye. Iibhedi ezikhweleneyo ziyafumaneka. I-Lubi day Queen Couch bed kunye neematrasi zomoya
ziyafumaneka. Ibhafu isetyenziswa nangabanye abantu. Ndiyazidla ngokugcina indawo icocekile ngenxa yeendlela zokuqonda. Iitawuli = $ 5/ea, kungekhona ukuthengiswa. Umgangatho osezantsi unamagumbi aliqela anedinala negumbi lokuhlala. Indawo yokujima = Living Rm. Indawo yokuhlamba iimpahla yeyabantu abahlala ngaphezu kweentsuku eziyi-5 kodwa vele ubuze, imali encinci.
Eli likhaya elisebenza kakuhle ibe asinayo igesi. Isebenza kakuhle ngamandla ngaphezu kwe-93% yamanye amakhaya aseOhio ngokutsho kweDep.
Sine-back osmwagen YAMANZI!
Indawo yokuhlamba impahla iyafumaneka ukuba uhlala ngaphezu kweentsuku eziyi-5. Zonke kufuneka zilandele imithetho yokusetyenziswa kweempahla okanye ungalahlekelwa idiphozithi yakho yokhuseleko. (Ndithanda ukugcina izinto zam, ukuba uyazilungisa izinto zam okanye awukwazi ukulandela imiyalelo elula ngoko nceda uhambe.) Nabani na odinga indawo yokuhlamba iimpahla iintsuku ezingaphantsi kweziyi-5 angasebenzisa izixhobo ngemali encinci kuxhomekeka kubuninzi bomthwalo wakho.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
Iintsuku eziyi-7 e Cleveland Heights
Ikhuselekile. Ilayibrari ye-Lee Road kunye nevenkile yokutyela
isekoneni. Iipaki neendawo zokudlala zikufuphi nase. Indawo eyingqongileyo isemagqabini kwaye ikumqolo weevenkile zokutyela. Indawo yokuzilolonga ikufutshane. Ivenkile yokutya iZagara 's iphantsi kancinci kwi-Lee Road. Ndinabanye babamelwane abaphambili endinokuhlala nabo kufutshane. Ukuhamba imizuzu eyi- usuka kwivenkile yokutyela uLee, iLayibrari Kawonke-wonke, iCVS neCedar Lee Movie Theater . I-Cafe Tandoor kunye noMnumzana Brisket ziphantsi kuMzantsi Taylor. Iimeko zaseNtshona kukukhwela ibhayisekile ngokukhawuleza okanye imoto okanye ibhasi okanye ukuhamba ngeenyawo. NDANDIKADE NDISEBENZA APHO. Kunjalo nakwiindawo zokutya, ekujoliswe kuzo, kunye neLopez.
I-24-7 kodwa ndiza kusebenza ndize ndihlale ngaphandle kweenwele zakho. Ndiyakuhlonipha ukuba wedwa, kodwa ndifumaneka ukuze ndincokole okanye ndikufundise amacebiso ezempilo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cleveland Heights